National News – Page 384 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
राहत र उद्धारका लागि सरकारले शीघ्रातिशीघ्र पहल गरोस् : क्रान्तिकारी माओवादी
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्को यस घडीमा राहत र उद्धारका लागि शीघ्रातिशीघ्र पहल गर्न सरकारसित विशेष आग्रह गरेको छ । ओली सरकार कामचलाउ सरकारको रुपमा रहेको र नयां सरकार गठन नभइसकेको यो संक्रमणकालीन अवस्थामा आइलागेको प्राकृतिक विपद्को सामना र त्यसको यथाशक्य व्यवस्थापनका लागि क्रान्तिकारी माओवादीले यस्तो आग्रह गरेको हो । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका […]
Posted in: National NewsLeaveacomment
बाढीपहिरोको कारण २८ जनाको मृत्यु, २४ बेपत्ता
काठमाडौं । केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशभर २८ जनाको मृत्यु भएको छ । बाढीपहिरोमा परि २४ जना बेपत्ता रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । बाढीपहिरोमा परि १० जना घाइते भएको पनि गृहले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार प्यूठानमा ६, गुल्मीमा पाँच, पाल्पामा चार, बाग्लुङमा चार, मकवानपुरमा तीन, रुपन्देहीमा […]
Posted in: National News, NewsLeaveacomment
राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ सरकार गठनको आह्वान
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमतीय सरकार गठन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरेकी हुन् । संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ अनुसार सात दिनभित्र सहमतीय सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले दलहरुलाई आहृवान गरेकी हुन् । सरकार गठनका लागि आहृवान […]
देउवाले बोले दक्षिणका कुरा
संसदमा चलिरहेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा रोलक्रम र समयका हिसाबले अलि पछाडि नै बोले । आइतबार संसदमा आफ्ना कुराहरु राख्दै देउवाले बन्ने सरकारको बचाउ गर्न थाले । उनले संसदमा सम्बोधन गर्दै ओली सरकारले अघि बढाएका द्वीपक्षीय र वहुपक्षीय संझौता र कामहरु अब बन्ने सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत् व्यक्त गरे । उनले […]
सरकार र केसीबीच चारबुंदे सहमतिपछि आज अनसन तोडिंदै
सरकार र डा. गोबिन्द केसी बीचमा आइतवार चार–बुंदे सहमति भएको छ । यो सहमतिपछि आज सोमवारबाट केसीले अनसन तोड्ने आशा गरिएको छ । विवादित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजलाई अन्ततः वीर अस्पतालले खरिद गरी सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने भएपछि केसी र सरकारबीच आइतवार चारबुँदे सम्झौता भएको हो । आठौं अनसनको १५औं दिन आइतबार राति डा. केसी […]
राप्रपाले ओली नेतृत्वको सरकार छाड्यो
काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता पशुपतिशम्शेर राणाको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चावहिलमा शनिवार बसेको बैठकले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको पार्टीका सहप्रवक्ता किरण गिरीले जानकारी दिए । राप्रपाबाट श्रम तथा आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारी दीपक बोहोरा […]
Posted in: National News, PoliticsLeaveacomment
सप्तकोशीमा पानीको बहाव उच्च
काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण सप्तकोसीमा पानीको बहाव उच्च भएको छ। शनिबार साँझ सप्तकोशीमा बहाव उच्च भएपछि खतराको संकेत स्वरुप रातो झण्डा फहराइएको छ । रातिमा बत्ती बालिएको छ । शनिबार साँझ पानीको बहाव दुई लाख ४२ हजार ७२५ क्युसेक पुगेको छ। पानीको बहाव बढेसँगै ३१ वटा ढोका खोलिएको छ। पानी बढेसँगै राति बत्ती बालिएको […]
आर्थिक विधेयक बहुमतले अस्वीकृत
काठमाडौं । ब्यवस्थापिक संसदको बैठकले आर्थिक विधेयक अस्वीकृत गरेको छ । संसदको बहुमतले उक्त विधेयक अस्वीकृत गरेको हो । विधेयक प्रस्तुत गर्ने क्रममा सभामुख ओनसरी घर्तीले विधेयकहरु निर्णायार्थ पेश गर्ने क्रममा गडबडी गरेको भन्दै सांसदहरुले होहल्ला गरेका थिए । यसअघि सांसद प्रेम सुवाल र डिल्लीप्रसाद काफ्लेले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव पनि बहुमतले अस्वीकृत भएको सभामुख […]
प्याकेजमै सहमति जुटाउने बैकल्पिक प्रस्ताव
काठमाडौं । आर्थिक विधेयक या अविश्वासको प्रस्तावमध्ये कुनलाई पहिलो सूचीमा राख्ने भन्ने विवादले व्यवस्थापिका संसद चल्न नसकिरहेकाबेला नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्याकेजमै सहमति जुटाउने गरी बैकल्पिक प्रस्ताव अघि सारेका छन् । कुन प्रस्तावलाई पहिलो कार्यसूचीमा राख्ने भन्ने विवाद नमिल्ने भएपछि मुठमेड निम्तिने सम्भावनाका कारण सहमति जुटाउने पहल भएको हो । तर प्रधानमन्त्री केपी […]
डा.केसीका मागबारे पहिलो चरणको वार्ता निश्कर्षमा पुगेन
काठमाडौं । सरकार र डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधिबीच बिहीबार भएको वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । सरकारले गठन गरेको वार्ता टोली र १२ दिनदेखि अनसनरत प्रा।डा। गोविन्द केसीका प्रतिनिधिबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो । पुनः वार्तामा बस्ने गरी आजको वार्ता टुंगिएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवम् स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव ड। सेनेन्द्रराज उप्रेतीले […]
राष्ट्रघातको इतिहास दोहोराउने षडयन्त्रमा ओली
संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदन
भारतीय बाँधका कारण सप्तरीको तिलाठीका ५० बढी घर डुबानमा
आजको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन